कोरोनाको अघि ट्रम्पको केही लागेन – Sulsule
निनाम कुलुड. 'मंगले' २०७७ असोज ३० गते १३:३२ मा प्रकाशित
६ मार्च, सन् २०२० मा भुटान भ्रमण गर्न आएका अमेरिकी पर्यटकमा पहिलोपटक ‘नोबेल कोरोना भाइरस को संक्रमण’ देखा परेको थियो । त्यसको ६/७ घण्टामै भुटान सरकारले ती अमेरिकी पर्यटक कहाँ–कहाँ गए ? कस–कसलाई भेटे ? सोधखोज गरेर ती पर्यटकसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई लगेर क्वारेनटाइनमा राख्यो । फलतः भुटानमा (कोभिड–१९) को भाइरसका कारण संक्रमितको संख्या हालसम्म २८३ जना मात्रै रहेको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । हुन पनि भुटानमा गत अप्रिल महिनाको अन्त्यसम्ममा पनि (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन । (आर्थिक दैनिकबाट)